पानी दिवस तारे होटलमै किन ?
मार्च २२, चैत ८ गते विश्व पानी दिवस । नेपाल जलस्रोतको धनी मुलुक तर पानीको हाहाकार हुने मुलुक पनि हो । आफ्ना साधन र स्रोतलाई कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी उपयोग गर्ने, दूरपयोग रोक्ने र अपार जलस्रोतबाट देशले समृद्धि र सम्पन्नता आर्जन गर्ने भन्ने योजना बनाउने दिन पनि हो विश्व पानी दिवस । नेपालमा पानी दिवस कसरी मनाइएछ, यो सुनेर आफैलाई लाज लाग्यो, आमनागरिकले सरकारका यस्ता कृयाकलाप देखेर लाज मानेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघले समेत आहृवान गरेको पानी दिवस नेपालमा पनि आयो र गयो । जसरी नारी दिवस आयो, गयो । नारीहरुले स्वतन्त्रता र हक, हिंसाबाट बच्ने उपाय केही पाएनन् र नारी दिवस हरेक वर्षझैं आयो र गयो, त्यसैगरी हरेक वर्ष झैं पानी दिवस पनि आयो र गयो । पानी दिवसका दिन यसरी आमसर्वसाधारणले पानीको हाहाकार बेहोरिरहे, भुक्तमान खाइरहे । एक ग्राी पानी लिन आधारातमा उठ्नुपर्ने र सिंगो विहान खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म ?
पानी दिवसका दिन कसरी पानी सर्वसुलभ बनाउन सकिन्छ, यसबारेमा राज्यस्तरबाटै व्यापक बहस र छलफल गरेर योजना बनाउन सकिन्थ्यो । पानी दिवसका दिन अव पानी अभाव हुनेछैन भनेर सरकारले सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न सकेको भए कति जाति हुनेथियो । सरकार छ, संसद छ, योजना आयोग पनि छ, पानी दिवस आयो र गयो, पानीको हाहाकार बेहोर्नेलाई पत्तै भएन ।
पानी इन्जिनियरहरु तारे होटल शंकरमा भेला भएछन् । पैसाको खोलो बगाएर ठूलो जमघट, तामझापका साथ ठूलठूला भाषण गरेर हृवीस्कीले मात्नु मातेछन् । जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीको योभन्दा अर्को उदाहरण हुनसक्दैन । सरकारले यस्ता नौटङ्कीवाजहरुलाई निरुत्साहित नगर्ने र आमनागरिकसम्म लाभ पुग्ने योजना नल्याउने हो भने राजस्वको दुरुपयोग भइरहनेछ । जनताको नाममा यसैगरी पानीको बदला हृवीस्की पार्टी भइरहने छ ।
हृवीस्की पार्टी, तारे होटलको जमघट पानी दिवस हुनसक्देन ।
सरकार यस प्रकारका पानी दिवस अथवा कुनै पनि नामको दिवसले आमनागरिकको मनमा सरकार छ भन्ने अनुभूत गर्दैन । सरकार सरकारजस्तो हुनुपर्छ । यस जनािबरोधी कृयाकलापमा बन्देज लगाउनु पर्छ । जति पैसा यसवर्ष तारे होटलमा खर्च गरियो, त्यो पैसा कुनै गाउँमा पठाइदिएको भए एउटा गाउँमा पानीको हाहाकार समाप्त हुनेथियो । सुक्दै गएका र अतिक्रमणको चपेटामा परेका पानीका प्राकृतिक मुहानहरु कहाँ कहाँ छन्, तिनको संरक्षणमा के गर्न सकिनछ, त्यति कुरा पानी मन्क्रालयले गर्न सकेन । यो कुनै व्यत्तिको विरोध होइन, प्रवृत्तिको आलोचना हो । यो आलोचनाले भर्खर सकिएको नारी दिवस, पानीदिवसजस्ता दिवसको हुर्मत लिन अब बन्द गरिनुपर्छ ।